Marketing sy dokam-barotra amin'ny finday | Martech Zone
Fivarotana finday sy doka
Alatsinainy, 27 Jona, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ity infographic ity dia natambatr'ireo olona tao Microsoft andro. Fantatrao ve fa ny ampahatelon'ny mpampiasa Facebook dia miditra amin'ny alàlan'ny finday? Sa hoe horonan-tsary Youtube 200 tapitrisa no jerena amin'ny finday? Sa izany, amin'ny salan'isa, dia mandany 2.7 ​​isan'andro isan'andro amin'ny fitaovana finday… miaraka amin'ny 91% amin'ilay hetsika ho ara-tsosialy?
Raha tsy fantatrao ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tag sy QR Code dia eto dia araka ny tranokalan'ny Microsoft Tag izy ireo:
Microsoft Tag dia kaody bara finday 2D izay ahafahanao mampifandray ireo akora ivelanao amin'ny tontolon'ny dizitaly. Ampandraiso anjara amin'ny fotoana fohy ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny findainy.
Tag vs. QR: Tsy toy ny QR, ny Tag dia famaranana amin'ny famaranana ny vahaolana barcoding izay mamorona kaody azo ovaina, mampiasa Reader tokana ho an'ny mpanjifa farany tsy miova ary manome tatitra matanjaka.
Tatitra sy refy: Ny mari-pana dia misy metatra namboarina ahafahanao mandrefy ny fahombiazan'ny akora ivelan'ny Internet. Jereo hoe aiza sy oviana no nojerena scanner ny Tags anao - maimaim-poana.
Malaky: Ny haitao dinihin'i Tag dia mamela ny orinasa hanova fanentanana amin'ny fotoana rehetra, ahafahan'ny orinasa mihetsika sy mivoatra amin'ny fotoana tena izy ary manome ny vokatra matanjaka indrindra.
Orinasa kely sy haino aman-jery sosialy
Ahoana ny fomba hahazoana tranokala vaovao totohondry Google Tomorrow
Jun 27, 2011 ao amin'ny 1: 27 PM
Mobile Web no ho avy
5 Feb 2015 tamin'ny 12:50 maraina
Tena vaovao aho. Mila fanampiana aho azafady.
Febroary 6, 2015 amin'ny 4:30 PM
Inona no karazana fanampiana ilainao Stephen?